Agartuu Qeerroo (Hunkuroo Siyyaasaa) – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooAgartuu Qeerroo (Hunkuroo Siyyaasaa)
Qalbeessaa Dhangi’aatin, Waxabajji 17,2018
Many concerned people ask how the TPLF regime will come to an end and its genociders are brought to justice
Qabsoo FXG danqaruu
Wayyaanoonni Waan hinfakkaanne fakkeessanii HR-128 kan addunyaan qoqqobbii irra keesse of irraa kaasisuuf Uummanni nu duukaa/bira jira jechuuf alkallattiin uummata hiriira nagaa baasanii umurii dheereffachuu
Miseensota ABO fi addatti WBO fi Qeerroo Bilisummaa Oromoo akka uummanni saaxilutti hojii siyyaasaa jabeessuu
Ajjeechaaf Lola Uummata keenya irratti banamee jiru dhoksanii gaarummaa isaanii qofa akka lallabaniif qaamota akka tikaatti gargaaraa turan, kanneen maqaa Activistummaan biyya alarra jooraniif dirqamni laatamu. Qabxiileen “Agartuu Qeerroo ” har’aa kana qaba, suuta dubbisaa!
Agartuu Qeerroo Uummanni Oromoo gaddaaf gadadoo waggoota 26 dabarsee olitti, gidiraa ulfaataan bara bulchiinsa Lammaa…
Galatom Obbo Qalbeessaa Dhangi’aa,
Xiinxala mishaadhaa, kan shira diinaa guddooti nu hubachiise.
garuu qabsoon ummati Oromoo irra jiru shira wayyaannen nurratti xaxxu amma Wixataatti maal akka tahe teenyee eeguudhaa? Kun wayyannen hojii manaa akka nuuf laattu eeguu fakkaata. kun sirrii hin fakkaatu. Qabson Oromo akka saffisa baroota dhiyoo darbaniin arreduu qaba. Wayyannen maal akka gochuuf deemtu xiinxalamee fashalsuu fi hojii manaa akkuma bara dabree dursine kennuufiidha malee waan ishiin hujjattu hanga wiixataatti eeguu hin qabnu. Akas goonan ergamtooti actvistoota ifiin jechaa turan hujjaa sirrii hujjechaa turaniiree? shakkii jedhu kaasa.
Kanaaf, xinxala wayyaanee daaku dhuyeessu malee waan ishiin nurratti hujjette qofa xiinxaluun miidhaa fida.